चेरीहरू, सेबहरू, भेलाहरू, फूलहरू र एक सुनको 7! तपाईं यस स्वादिष्ट फल सलाद को आनंद र प्रगतिशील खजाना को रूप मा एक ठूलो बोनस संग यो जुत्ता मौका को आनंद ले सकते हो! ध्वनि जस्तो मनपर्छ? त्यसपछि यो कताई प्राप्त गर्ने समय हो! अन्तिम फल स्लट तयार छ र पर्खँदै छ: गोल्डेन सेभेन!
के तपाइँले हाम्रो अनलाइन क्यासिनोमा नोभिओलिन स्लट मिसिनहरू टेलल लिनु भएको छ? त्यसोभए फलफूलहरू वरिपरि उक्लिएका फलहरू पाउनुहोस्!
तल गोल्डन सेभेन बारे जान्न आवश्यक के एक सिंहावलोकन हो ताकि तपाईं नि: शुल्क को लागि गेम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
गोल्डन सेभेन बारे
गोल्डन सेभेन पाँच रिसेप्सन कताईरहेछ र जित्न सम्भव छ जस्तो मेल खाने प्रतीकहरु लाई लाइन बनाउने प्रयास गर्दै। आफ्नो दाँत राख्नुहोस् र सानो भाग्यको साथ, 5, 10 वा 20 जीत लाइनहरू मात्र प्रभावशाली विजेताहरू, तर प्रगतिशील खजाना पनि उपन्यास हुनेछैन! हाम्रो अनलाइन क्यासिनोमा मुख्य उद्देश्य एक मिल्ने पङ्क्तिमा पाँच मिल्दो चिन्हहरू मिल्दछ। गोल्डन सेभेननमा विजेता पद्धतिहरू बायाँदेखि दाँया तिर रेलमा दौडिन्छन्। तपाईंको विजेता संयोजनमा भएका प्रतीकहरू मेल खान र जङ्गलको छेउमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छन् (पहिलो रिेलमा सुरू हुने) बिना अन्य प्रतीकहरू बाधामा। स्लॉट खेल गोल्डेन सेभेन खेल ट्वीस्टमा निःशुल्क खेल्न सकिन्छ।
उत्तम क्यासिनो बोनस - सम्भावित खजानाको साथ!
गोल्डेन सेभेनन एक सामान्य प्रगतिशील खजाना छ। यदि तपाइँ रिलेहरूमा7प्रतीक 15 पटक उडान गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले खरगोशमा हिर्नुहुनेछ र एक ठूलो ट्विस्ट विजयी हुनेछ! तपाईले कति पट्टि पाउनुहुनेछ तपाईको शर्तमा निर्भर हुनेछ। तपाईको वर्तमान शर्त 10,000 समयमा खजाना पेआउट सुरु हुन्छ।
जुवा सुविधाको साथ जोखिम र जीत - प्ले गर्नुहोस्
गोल्डन सेभेन र अन्य नोभिओलिन शीर्षकहरूमा तपाई प्रायः मौका पाउनुहुन्छ, सानो भाग्यको साथमा, तपाइँको क्यासिनो राउन्ड ईन्जिनियरिङ को दोहोरो! यस्ले कसरी काम गर्छ? यो सरल हुन सकेन:
1 नयाँ विण्डो खोल्नको लागि नारंगी "Gamble" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
2 कार्ड रङ छान्नुहोस् - रातो र कालो?
3 हेर्दा कार्ड प्रकट भएको छ!
यदि तपाईंको भविष्यवाणी सही थियो भने, तपाईं उच्च डिनर ल्यान्डिंग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामी तिनीहरूलाई दोहोर्याउनेछौं! यदि होइन भने, तपाईं मुख्य खेलमा फर्कन सक्नुहुन्छ र, यदि तपाइँसँग हाम्रो अनलाइन क्यासिनोमा पर्याप्त ट्विस्टहरू छन्, एक चोटि आफ्नो भाग्य प्रयास गर्नुहोस्।
गोल्डेन सेवन अपडेट गरिएको: जनवरी 24, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 गोल्डेन सेवन
2.0.0.1 अल्ट्रा ताजा
2.0.0.2 क्रिसमस मीरी
2.0.0.3 किक गधा
2.0.0.4 वेगास मा बिल्ली
2.0.0.5 ऐलिस र पागल चिया पार्टी
2.0.0.6 देवताहरु को आयु रूल्टे
2.0.0.7 गुप्त रोमांस
2.0.0.8 Copa mobile मा